पतञ्जलिले बनाएको कोरोना विरुद्धको औषधि विवादमा | Hamro Doctor News
शुक्रबार, २४ बैशाख २०७८ /
देशभर ६ सय ५० जना पत्रकारलाई कोरोना सङ्क्रमण, सात जनाको मृत्यु
जफत भएको साढे ६ हजार अक्सिजन सिलिण्डर अस्पतालमा बाँडिदै
म्याग्दी अक्सिजनमा आत्मनिर्भर
रसियन खोप स्पुतनिक-भी ल्याउन अनुमति
भारतमा तेस्रो पटक कोरोनाका कारण ४ लाखभन्दा धेरैमा संक्रमण
पतञ्जलिले बनाएको कोरोना विरुद्धको औषधि विवादमा
मन्त्रालयले भन्यो: 'कोरोनिल' बारे कुनै जानकारी छैन
एजेन्सी, १० असार । पतञ्जलि रिसर्च पाउन्डेशन ट्रस्टले मंगलवार सार्वजनिक गरेको कोरोना विरुद्धको औषधि विवदामा तानिएको छ ।
योग गुरु बाबा रामदेवसँग सम्बन्धीत रहेको पतञ्जलीले मंगलवार एक कार्यक्रमकाबीच कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधि बनाएको भन्दै ‘कोरोनिल’ नामक औषधि सार्वजनिक गर्यो । तर, पतञ्जलिले बनाएको औषधिको बारेमा भारत सरकारले अनभिज्ञता जनाएको छ । मन्त्रालयले मंगलवार साँझ पत्र सार्वजनिक गर्दै पतञ्जलीले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको औषधिबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नभएको उल्लेख गरेको छ ।
भारतको औषधि सम्बन्धी जिम्मा पाएको आयुष मन्त्रालयले पतञ्जलीले सार्वजनिक गरेको औषधिको बारेमा कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । मन्त्रालयले पतञ्जलिको तर्फबाट बनाइएको औषधिको तथ्य र वैज्ञानिक अध्ययनको विषयमा कुनै जानकारी नभएको बताएको छ । साथै मन्त्रालयले औषधिबारे विस्तृत विवरण माग गरेको छ । मन्त्रालयले पतञ्जलिले बनाएको औषधि सर्वसाधारणले कुन आधारमा प्रयोग गर्ने र यो औषधिको परिणाम के हुन सक्छ भन्नेबारे मन्त्रालयलाई कुनै जानकारी नगराइएको पनि पत्रमार्फत् जनाएको छ । यता मन्त्रालयको पत्रपछि बाबा रामदेवले भने दुई तर्फ संवादमा त्रुटि भएको र मन्त्रालयलाई यो विषयमा सबै जानकारी उपलब्ध गराइसकेको दावी गरेका छन् ।
उनले औषधि सार्वजनिक भएकै साँझ आयुष मन्त्रालयलाई औषधि सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी पठाइएको पनि बताएका छन् । उनले भने, ‘मन्त्रालयलाई पठाइएको पत्रमा औषधि र औषधिको कम्पोजिसनको बारेमा जानकारी गराइएको छ । साथै औषधिको प्रयोग गर्ने तरिकाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।’
मंगलवार एक कार्यक्रमकाबीच बाबा रामदेवले हरिद्वारमा कोरोनाविरुद्धको औषधि ‘कोरोनिल’ सार्वजनिक गरेका थिए । उनले दिल्ली लगायत भारतका विभिन्न सहरमा पतञ्जलीले क्लिनिकल कन्ट्रोल स्टडी गरेको दावी गर्दै अध्ययनको क्रममा दुई सय ८० जना कोरोना संक्रमितलाई सहभागी गराइएको बताए । क्लिनिकल स्टडीको नतिजामा शतप्रतिशत बिरामी स्वस्थ भएको र कसैको पनि मृत्यु नभएको उनको दावी छ । उनले कोरोनाको सबै चरणलाई औषधिले रोक्ने काम गरेको र दोस्रो चरणमा क्लिनिकल कन्ट्रोल ट्रायल गरिएको जानकारी गराए ।
बाबा रामदेवले एक जना मानिसमा गरिएको क्लिनिकल कन्ट्रोल ट्रायलको अध्ययन गरिको जसमा तीन प्रतिशत बिरामी ६९ प्रतिशत निको भएको अर्थात् कोरोना पोजेटिभ नेगेटिभ भएको दावी गरेका छन् । यस्तै सात दिनभित्र शतप्रतिशत बिरामी स्वस्थ भएको पनि उनले दावी गरे । उनले यो औषधि सेवनले शतप्रतिशत बिरामी निको भएको र शून्य प्रतिशत मृत्युदर रहेको उल्लेख गरे । क्लिनिकल कन्ट्रोल ट्रायललाई लिएर विभिन्न अप्रुभल लिनुपर्ने हुन्छ । जसका लागि इथिकल अप्रुभल पनि लिइयो, फेरि सीटीआईआरको पनि अप्रुभल र रजिस्ट्रेशन गराइएको बाबा रामदेवले बताए ।
बाबा रामदेवले भने, ‘यो औषधि बनाउँदा देशी सामानको प्रयोग गरिएको छ । समा मुलेठी, काढा जस्ता सामाग्री समावेश छन् । साथै गिलोय, अश्वगन्धा, तुलसी, श्वासरिको पनि प्रयोग गरिएको छ । साथै सबै वैज्ञानिक नियमहरुको पनि पालना गरिएको छ ।’
कोरोनाविरुद्धको चिनियाँ खोप विश्वसनीय नभएको विश्व स्वास्थ्य संगठनको दावी
मालीकी एक महिलाले जन्माइन् नौ सन्तान
वायु प्रदूषणले बालबालिकामा उच्च रक्तचाप र मुटुसम्बन्धी रोगको खतराः अमेरिकन हर्ट एसोसिएसन
अपाङ्ग बाल अस्पताल तथा पुर्नस्थापन केन्द्रलाई ५ लाख अमेरिकी डलर सहयोग
घरमै गएर स्वाब संकलन गर्दा ५ सय शुल्क लिन स्थानीय तहलाई निर्देशन
चितवनमा अस्पताल भर्ना भएका सबै संक्रमित अक्सिजनको भरमाः अध्यक्ष डा. अधिकारी
तपाईंको बच्चामा घुर्ने समस्या छ ? जानौं बच्चामा हुने घुर्ने समस्या र जोगिने उपायबारे
बेलझुन्डी अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा एक जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, ५९ जना जोखिममा
ग्यास्ट्रिक भएकालाई पेटको क्यान्सरको जोखिम उच्च
एक्कासी ढाड वा कम्मरमा झस्का किन पस्छ ?
अटिजमबारे जनचेतनामुलक कार्यक्रम शुरु - प्रर्दशनीवारे एक रिर्पोट
Samples Tested - २५,७८,४१८